မိတ်ဆက်ပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မိတ်ဆက်ပါတယ်
Posted by ကူမားရ် on Nov 1, 2010 in News | 37 comments
စာဖတ်ရတာ ရေး၇တာ ၀ါသနာပါတဲ.သူပါ အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်။
မိတ်ဆက်တာ ဘာမှလည်းမပါပါလား … တစ်ခုခုတော့ ပြောပြသင့်တာပေါ့ … ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘာညာ ကွိကွ ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဖက်တီး၊ အန်ကယ်ကြီး နဲ. ဝေေ၀ တို.ရယ်။၀မ်းသာလိုက်တာ ရင်တောင်ခုန်တယ်ဗျာ ကြိုဆိုခံရလို.ပါ။စာတစ်ကြောင်း ကိုတောင် မနဲ ရေးနေ ရလို. မိတ်ဆက်နဲ သွားရပါတယ် ခွင်.လွတ်ကြပါ။
အသက်ကြီးကြီး ခပ်ပေါပေါ အရီသန်သန် စာပေ ၀ါသနာ ပါသူ တစ်ယောက်ပါ ယော.ရှိူင်းယား မြက်ခင်းတွေ ပေါ်က စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ် နေပါတယ်။ ဒါဆိုရ ပြီလား ဟင်။ အခုတောင်မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာတယ် ဟီးဟီး။
ယော့ရှိုင်းယားကဆိုတော့ Wuthering Heights နဲ့ နီးမှာပေါ့နော်။ Heathcliff တစ္ဆေရော မြက်ခင်းတွေပေါ်မှာ လျှောက်သွား နေတုန်းပဲလားဗျ။
မေးမြန်း အသိလုပ်တာ thank you very big ပါနော်။
wuthering ရေးတဲ. အင်မလီဘရွန် တို.နေတဲ. နေရာနဲ. ကွမ်းနှစ်ယာညက်လောက်ပဲဝေးပါတယ်။
Heathcliff တော.မတွေ.ဘူး ဒီမှာ Catherine တွေတော. စနေနေ.ညတိုင်းမူးကွဲနေတာပဲဗျာ ဟီးဟီး၊
ယော.ရှိူင်းယား မြက်ခင်းတွေ ပေါ်က စားသောက်ဆိုင်လေး ဆိုတာ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတယ် ဆိုတာလေးလည်းထည့်ပြောဦးလေ..။
တတ်နိုင်၇င်တော့ .. ဆိုင်ရှေ့ထွက်ပြီး ဓါတ်ပုံလေးတပုံပါရိုက်တင်လိုက်..။
ကို ကိုင်ရေ ထပ်ပြီး ၀မ်းသာအောင်ဖြည်.ပေးတဲ.အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ နေရာက ဘိလပ် မှာ ရှိပါတယ် ၊ပြည်နယ် တစ်ခုပါ။ဓါတ်ပုံတော. မတင်ပါရစေနဲ.၊ ရထားတဲ. နွေးထွေးတဲ. မန္တလေးဂဇက်က မိတ်ဆွေ
တွေကို မဆုံးရူံး ပါရစေနဲ.ဗျာ။ နာမည် ခေါ်မှား၇င် ခွင်.လွှတ်နော် သူများခေါ် တာတွေ.လို.။အခုမှရောက် ပေမယ်.စာရေးသူတွေ အားလုံးရဲ.စာတွေ ကိုဖတ်ပြီးသား ရင်ထဲကနေ ရင်းနှီးပြီးသားပါ၊ စာမရေးတတ်လို. ဖတ်အားကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဘိလပ် မှာ ရှိပါတဲ့ ပြည်နယ် တစ်ခုရဲ့ယော.ရှိူင်းယား မြက်ခင်းတွေ ပေါ်က စားသောက်ဆိုင်လေး ဆိုတော့
မွန်ပြည်နယ် ဘီလူးကျွန်း ပင်လယ်ကမ်းစပ်က လယ်တောတွေနဲ့ တော်တော် နီးတာဘဲ
ဒါနဲ့ငပိဘယ်ဈေးရှိလဲ?
မိတ်ဆက်တဲ့ အဘ အေကေအက်ဒဘလူအီး ဘာသုံများထွက်လဲဟင်.. နီးစပ်ရာ အသံထွက်လေးတော့ ပေးပါအုန်း.. ပုံတော် မတင်ချင်လည်း အမည်နာမ အမိန့်တော်ရှိပါ။
ဘိလပ်မြေပေါ်မှာ နေတာဆိုတော့.. အဘ ဖိနပ်တော့စီးနော်.. သံမံတလင်း အေးတယ်.. ကျန်းမာရေး ဂုစိုက်နော်..
အရီသန်တယ်ဆိုလို့.. ဆူး နောက်လိုက်တယ်.. အဘ လည်း အဆင်ပြေတဲ့ အခါ စိတ်ရှိသလို ရေးနိုင်ပါစေ။ ပျော်နိုင်ပါစေ။
ငပိဈေးက ဒီမှာ အတက် အကျ ပြင်းတယ်။ လက်ရှိ ပေါက်ဈေး မရွေမိုး အကြီး ၁၀ပေါင် အသေး ၅ပေါင် နဲ.
အရီးတောင်း ကြီး ၈ ပေါင် အသေး ၃ပေါင် ကို ပို.ခ ပါ ဆို ၅ပေါင် ပိုပေး၇ပါတယ်။ ကြိုဆိုတာဝမ်းသာလိုက်
ကို akswe တို့မြို့မှာ တ၇ုပ်ဆူပါမားကက်တို့ အေးရှားဆူပါမားကက်တို့မရှိဘူးလား။ ထိုင်းကလာတဲ့ ငါးပိက ပိုတောင်သန့်သေး၊ ဆိုးဆေးလုံးဝမပါဘူး။ pickleတွေဆိုလည်းအစုံရတယ်။ ဒညင်းသီးဆားရည်စိမ် ဆိုလည်း အနံ့မထွက်ဘူး။
မြို. က Sheffield နဲ. leeds ကြား မှာဆိုတော. အေးရှားဆိုင် မရှိပါဘူး။
ငပိရ ချင် ရင် အဲဒီ ကိုသွား ရ ပါတယ် စုံနေအောင် ၇တယ်။အဘထ ရှူဆေး တောင် ထိုင်းဆိုင်မှာ ရောင်းပါတယ်။
ကိုကက် လည်း ကျွန်တော်. ရဲ. favouriate စာေ၇းကောင်းသူပါ၊အားကျပါတယ်ဗျာ။
ညနေ ၄နာရီ က ခု မနက် ၄နာ၇ီ ထိ ကြိုဆိုမှုတွေ ကို ထိုင်ပြီး ၀မ်းသာ ၇င် ခုန်နေတာ မအိပ်၇သေးပါဘူး၊
အလေးထားနုတ်ဆက်တာ ကို ကျေးဇူး ဂေါဇီလာပါ ဗျာ။
အေကေဆွေ လို.ပဲ အသံထွက် ရမယ် ထင်ပါရဲ.၊ ဒီကလူတွေပေါ.ဗျာ
နံမည် အရှေ.လုံးတွေကို အတိုလုပ်ပြီး နောက်လုံး ပဲခေါ်တော.ဒီလိုဖြစ် ရတာ
အရီသန်တာတော.မပြောပါနဲ.တော. အခုကို အူလိမ်.နေပြီ ဟီးဟီး
အဘတော. အသက်ကြီးမှ သူငယ်ပြန်နေရပြီ ခွိခွိ။
သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါ။မဆူးကိုလည်း စာတွေဖတ်ပြီးရင်းနှီးနေတာပါ၊ကြီုဆိုတာ အ၇မ်းဝမ်းသာတာပဲ၊
အဘဆွေပေါ့နော် … ဂေဇက်က သက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်ရင် ဖိတ်မယ်နော် …
ဟုတ်ကဲ.ပါ မဝေ ၊ အဘဆွေ ပါ
ဖိတ်ပါ ကိုယ်.ထက်ငယ်သူတွေကို တတ် ထားတဲ. တစ်လွဲတွေ သြ၀ါဒ ပေးပါ.မယ်။
မဝေရေးတဲ.စာတွေ လည်း အ၇မ်းကောင်းတယ်၊အဲဒီလိုရေးတတ်ချင်တာဗျာ၊
မဝေရေး ပါ အဘဆွေ ဘတ်ပါမည်၊
welcome ပါအဘဆွေရေ။ ပြောတော့စာမရေးတတ်ဘူးတဲ့။ ပီးတော့ Comment တွေမှာရေးတတ်လိုက်တာများ … ငပိစီးပွားရေးတောင်လုပ်ပီးနေပီ။ ဟီးဟီး … အဘဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မောင်လေးဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အာဖျံကွီးထက်နောက်ကျပီး Member ၀င်လို. အာဖျံကွီးရဲ. Junior ပဲနော်။
welcome လုပ်တဲ.အတွက် ရှဲရှဲ ပါ။စာက တစ်ကယ်မရေးတတ်တာပါ။
ကြာ၇င်တော. ဒီမှာလက်ဆော.ရင်း တိုးတက်လာဖို.ရှိပါတယ် ဟီးဟီး။
ဘဆွေပဲခေါ်ခေါ် မောင်လေးဆွေပဲခေါ်ခေါ် ရပါတယ်ဗျာ ကွီး ကိုတော.
တစ်လုံးထဲ ခေါ်တာ စိတ်မရှိနဲ.နော် confuse ဖြစ်နေလို.။
senior ဆိုတာ junior ကို မုန်.ကျွေးရတယ်နော်….ရှလွတ်၊ ပစားလည်းပေးရတယ်၊
စာရေးစာဖတ်ဝါသနာပါသူပီပီ မိတ်ဆက်ကိုရေးထာလိုက်တာများ~~ကဗျာ လင်္ကာ ရသစုံလင်စွာနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာမောသွားတာပဲ ဘဆွေရေ……..
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ……မဝေတို့ ဆြာဆူးတို့လိုမျိုး တိုင်းတပါးက လှပတဲ့နေရာလေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ပီး တင်ပေးရင်ကောင်းမယ်နော်
ကြိုဆိုတဲ.အတွက် ကျေးဇူး အကြီးကြီးတင် ပါတယ်။
အသက်ကြီးမှ စာရေးဖို.ကြိုးစားလို. ၇သစုံ သွားရင် ခွင်.လွတ်ပါ။
ဒါတောင် ငယ်ငယ် က ကျောင်းကောင်းကောင်းနေဘူးတာမဟုတ်ဘူး ဟီဟိ၊
ဓါတ်ပုံ တင်ဖို.စိတ်ကူးရှိ ပါတယ်၊မတင်တတ်သေးလို.လေ.လာအုံးမယ်။
လက်ဆော.ချင်နေတာနဲ. အတော်ပဲ၊ကင်မရာတစ်လုံးလည်းကောက်ရထား တာရှိတယ်၊
လာမြှောက်ပေးတယ် ပေါ. နော် မုန်.ဟင်းခါးအသိုးနဲ. ကျပ်တန်ပြဲတော.တွေ.ပြီ ဗျ ဟင်းဟင်း
အဘဆွေ ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. ဘိလပ်က လူတွေက မျိုးရိုးစဉ်ဆက် စာလုံးသုံးတယ် ဆိုတော့.. အဘဆွေရဲ့ အဖေကလည်း ဆွေ အဘရဲ့ အဖေရဲ့ အဖေ အဘိုးကလည်း ဆွေ.. အဘိုးရဲ့ အဖေ အဘေးကလည်း ဆွေ.. အဲလို မျိုး အဘတို့က မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဆွေလားဟင်..
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. ကင်မရာ ဘယ်နားက ကောက်ရတာလဲဟင်.. အဲဒီနား သွားကြည့်မလို့.. နောက်တလုံး ရလို ရငြား.. အတင်းထောက်.. အဲ.. သတင်းထောက်ဖို့ ကင်မရာ လိုနေလို့..
အဘ ကမြန်မာပြည် ပေါက်တာပါ ပန်ချာပီဆေးရုံဆိုလား ဘာဆိုလားပဲ…
မျိုးရိုးနာမည် မရှိ ပါဘူး
ကင်မရာ ကတော. ဘတို. ဆိုင် နားမှာ ၀စ်လစ်စလစ် နဲ. မူးနေတဲ. ကက်သရင်းတွေ ကျကျန်နေခဲ.တာ။
ဆိုင် က ၀မ်ထမ်းတွေကောက်ရတာ ကို ဘက လူကြီးပီပီ သူတို.တွေ အချင်းမများ၇အောင် ၀င်သိမ်းလိုက်ရတာ။
ရန်မဖြစ်ကြ ရအောင် ကာကွယ် တဲ. သဘောလည်း ပါတာပေါ.လေ ဟီဟိ။
လိုသလောက် ဥာဏ်တွေ ကထွက်နေတော. မဆိုစလောက်ကလေး တွေ.တာနဲ.
မှိုပေါက် သလို ဆက်ကာ ဆက်ကာ ရေးသွားလိုက်တာများ တိုကောက်ကာ ဒန်ဒန်ဒန်ဖြစ်ရပါ.ပေါ.
အကြိုထောက်တာ ကိုပေါက်ရာ ၀မ်းသာမိတာမို. မြို.မန္တလာ ဒို.ရွာသားတွေရဲ. ထွးပွေ.မှုကြုံ။
စာတွေဖတ်ပြီးလေးစား ခင်မင်နေရပါတယ် အစ်ကို။
ရွာ ထဲ က မိတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးဝင်လာ တာ မုန့် လဲ ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကြိုဆိုရမှာပေ့ါ လေး)
ဘမာလိုရေးရင် ခံလိုက်ရမှာ ကြောက် လို. ( အသံမထွက်တတ်ပါ) ဒီလိုလေးပဲသုံးမယ်နော်
ကြိုဆိုတာ အရမ်း ကျေးဇူး တင်ခွင်.ပြုပါနော်။ အဘတောင် ချွတ်နင်းပြီးဝင်ခဲ.၇လို. မုန်.မပါခဲ.ရဘူး
နောက်မှနော် email နဲပို.လိုက်မယ် ဟီး၊
အဘဆွေကတော့ ဘက်စုံပါပဲလား … တို့ရွာကြီးတော့ စည်ကားတော့မယ်ဟေ့ … လက်ခုပ်တီးပြီး ကြိုဆိုလိုက်ရအောင် …
ရွီး.. ဖျောင်း.းးး ဖျောင်းးးး.. လက်ခုပ်ကြီး တီးလိုက်သည်.. ဘာလဲတော့ သိဘူး.. စပ်ကပ်ပွဲတွေ အကောင်ဘလောင် ရှိုးပွဲ တွေမှာ. give her, big hand… ဒီလို ကြားတာနဲ့ လက်ခုတ်တွေ တီးလိုက်တာဘဲ.. လက်ဝါးလေး တော့ နာသွားတယ်.. ဘာလဲတော့ မသိဘူး.. အဘိဓ္ဓါန်မှာလည်း ရှာကြည့်တာ ရှာမရဘူး.. သူများ လက်ခုပ်တီးလို့ တီးပေးလိုက်တယ်
မဝေနော် လာ မြောက် ပေးနေတယ် အဘတို.က ကပြစ် လိုက်မှာနော် ဟွန်း
မဝေတို.လောက် တော် ရင် ရပြီ
အဘဆွေ ပြစ်မှာလဲဟင်.. မီးကြောက်တယ်နော်.. မခြိမ်းခြောက်နဲ့.. ဒီမှာ ကလေးတွေ ကြီးဘဲ ရှိတယ်.. အသည်းနုလို့ မူးလဲ နိင်တယ်..
ကလိုက် မှာ ကိုပြောတာပါ ကလေးရယ် ဘမှာပြစ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး
ပဲဟင်းတောင် ညမနက်လောက် အောင် ကျဲကျဲ (တရုတ်မ မဟုတ်ပါ) လေးပဲစားပါတယ်။
က တာ ဒန်.တာကိုပြောတာ ပါ ( ပတုပ် တပ်တက် ပတ်ဘေ ဂျေး ဂျေး)
ဒါ က အင်ဂလန် က ဘင် သံတမျိုးဘဲနော် ရိုင်းတယ် မထင်ပါနဲ့ မြန်မာ ပြီပြီ အဘအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ? သား၊သမီး?
အသက်အကြောင်းတော.မပြောပါရစေနဲ. ဗျာ သူ.ကိုအရမ်းစိတ်နာလို.
ဒါပေမယ်.သမီးတွေက အများကြီးပဲ ကာရာအိုကေ တို. ဘိလိယက်ခုံတို.မှာ၊
အိမ်ထောင်မရှိတာ တော. ၆ခါ လောက် လားမသိဘူး ရှိပြီ ဗျ ခွိခွိ၊
အဘ ငယ်သေးတာဘဲ.. ဒါဆို စောင့်နေတာပေါ့နော်..
အားလုံးဝိုင်းပြီးကြိုဆိုကြတာ အရမ်းကို နွေးထွေးပါတယ်၊ အဲဒီလောက်အထိ မမျှော် လင်. ရဲခဲ.မိပါဘူး
ဘာမှလည်း မရေး တတ် မပြုတတ်နဲ. အချိန်တိုတို လေးအတွင်းမှာ အားလုံးနဲ. တစ်သားတည်း၊အရင်ထဲက ပင်
ခင် မင် လာခဲ. ကြ သလိုခံစား ရ ပါတယ်၊ခင် ပါတယ် ပျော်ပါစေ ဗျာ။